လင်းဇော်ထိုက်: February 2013
သင်ဒါတွေကို သိပါသလား..သင်ဒါတွေကို သတိထားမိပါသလား
(၁)Vatican City က ကမ္ဘာပေါ်မှာ အသေးဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ပြီး
လူဦးရေ ၁၀၀၀ ကျော် နဲ့ အကျယ်အ၀န်းက ၁၀၈.၇ ဧကပဲရှိတယ်။
(၂) Suicide Statistics တွေအရ တင်္နလာနေ့က
(၅) သင်ကြိုက်ရာနံပါတ်တစ်ခုကို မှတ်ပြီး ..
အဲဒီကောင်ကို ၂ ဆတိုး၊ ၁၀ ပေါင်း၊ ၂ နဲ့စား ပြီးတော့
မူလမှတ်ထားတဲ့ နံပါတ်ပြန်နှုတ်လိုက်ရင် ရလာမယ့် အဖြေက ၅ ဖြစ်ပါတယ်။
(၆)Dominica, Mexico, Zambia, Kiribati, Fiji နဲ့ Egypt
(၇)M&M Chocolate က စစ်သားတွေကို လက်မှာ ကပ်စီးဖြစ်မနေပဲ
စားနိုင်အောင် တီထွင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံး ချောကလက် ဖြစ်ပါတယ်။
James Bond 007 ဇာတ်ကား ကြည့်ဖူးကြတယ်။
သံလိုက်စွဲအားကြောင့် ကမ္ဘာကြီးဟာ 2327 ခုနှစ်မှာ
မြောက်ဝန်ရိုးစွန်းက လက်ရှိ Mid-Kansas နေရာရောက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး
တောင်ဝန်ရိုးစွန်းက အာဖရိက အရှေ့ပိုင်းနေရာကို ရောက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၀)အမေရိကန်က Major League Baseball (MLB) ကစားသမားတွေက
မဖြစ်မနေ အောက်ခံဘောင်းဘီ အနက်ရောင် ၀တ်ရပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကစားနည်းက ဘောင်းဘီဂွပြဲနိုင်တဲ့ အတွက်ပါ။
(၁၁)ဇီးကွက် က ငှက်တွေထဲမှာ အပြာရောင်က
ို မြင်နိုင်တဲ့ တစ်မျိုးထဲသော ငှက်ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂)Olympic အလံက စက်ဝိုင်းအရောင်တွေက
အနီ၊ အနက်၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အ၀ါ နဲ့ အဖြူခံပေါ်မှာ ဆွဲထားတာက
ကမ္ဘာပေါ်က နိုင်ငံတွေ အလံတိုင်းမှာ
အနည်းဆုံး အဲဒီ အရောင် ၁ ရောင်ပါလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၃)ကမ္ဘာအကြီးဆုံး McDonald ဆိုင်က Beijing, China မှာ ရှိပြီးတော့
square feet 28,000 ရှိပြီး ငွေရှင်းကောင်တာ ၂၉ ခုရှိပါတယ်။
(၁၄)La Paz, Bolivia မြို့က ကမ္ဘာပေါ်မီးလောင်မှု အနည်းဆုံး မြို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အထက် ပေ ၁ သောင်း ၂ ထောင် ကျော်မြင့်တဲ့
အတွက် လေထုထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ oxygen ပမာဏက
မီးလောင်ရလောက်အောင် မပါတော့တဲ့ အတွက်ပါ။
(၁၅)အပြာရောင် ဝေလငါးတွေ က ထုတ်တဲ့ အသံက 188 Decibels ရှိပြီး
ကမ္ဘာပေါ်က သက်ရှိတွေထဲမှာ အကျယ်ဆုံး အသံထုတ်နိုင်တဲ့
သတ္တ၀ါဖြစ်ပြီး အသံကို မိုင်ပေါင်း ၅၃၀ အကွာကနေတောင် ကြားရနိုင်ပါတယ်။
(၁၆)ကြက် နဲ့ ဘဲ က လူတွေစားတဲ့ အသားထဲမှာ မမွေးခင် ဥ
အနေနဲ့ကော သေပြီးတဲ့ အထိပါစားတဲ့ အကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။
(၁၇)လူတွေသေတဲ့ အခါမှာ နောက်ဆုံး
အလုပ်လုပ်သွားတဲ့ အာရုံက အကြား အာရုံ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၈)အမေရိကန်က WAL-MART စတိုးဆိုင်က
၇ မိနစ်တိုင်းမှာ $ 3,000,000.00 ပျမ်းမျှ အမြတ်ရတယ်။
(၁၉)ဘီယာကြော်ငြာ အများစုမှာ ဘီယာမှာ
အမြုပ်များများ ထွက်ဖို့ အတွက် ဆပ်ပြာရည်တွေ ထည့်သုံးကြပါတယ်။
(၂၀)ပန်းသီးပင်က နှင်းဆီပန်းပင် အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Bill Hanna နဲ့ Joe Barbera တို့က Tom & Jerry ကို ၁၉၃၉ မှာ စပြီး ဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။
(၂၁)ဘဏ်ဓားပြ တိုက်နေတဲ့ အချိန်မှာ
(၂၂)၁၉၀၇ ခုနှစ်ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ Theodore Roosevelt က
လူပေါင်း 8513 ယောက်ကို လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။
(၂၃)Alexander Graham Bell က သူ့ မိန်းမ နဲ့ အမေ ကို
တစ်ခါမှဖုန်း မခေါ်ခဲ့ဖူးဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က နားမကြား ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၅)Neil Armstrong လပေါ်ကို ခြေချတုန်းက
ဘယ်ဘက် ခြေထောက် အရင်ချခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၆)အက်စကီးမိုး တွေဟာ ရေခဲသေတ္တာကို
စားစရာတွေ မခဲဖို့ အတွက်သုံးပါတယ်။
(၂၇)အမေရိကန် ၄ ယောက်တိုင်းမှာ
၁ ယောက်က တီဗီ မှာ ပါဖူးကြတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။
(၂၈)Sunday နဲ့ စတဲ့ လတိုင်းမှာ “Friday 13th” ဆိုတာ ရှိပါတယ်
အားလုံး ဗဟုသုတ အပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံကြပါစေ..........
Credit to >>>>
၀န်ခံချက်။ ။ FDW Mail မ
Posted by linnzawhtike at 2/25/20130comments
နောင်တွင် ဆေးတပ်မှ ထင်ရှားသော ဗိုလ်မှူးများ၊ ဗိုလ်ကြီးများဖြစ်လာကြသည့် (ထိုစဉ်က) သူနာပြု ဆရာမလောင်းလေးများမှာလည်း မမောနိုင် မပန်းနိုင်ပဲ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို မလှလှအောင်၊ မယဉ်ယဉ်အောင် အမျိုးမျိုးပြုပြင် မွမ်းမံနေကြပါသည်။ စင်မြင့်ပေါ်တွင် မဟော်ဂနီရောင် ပြောင်လက်နေသည့် စန္ဒယားတစ်လုံးနှင့် ခန်းမကြီး၏ နောက်ဘက်နံရံတွင် စန္ဒယားတစ်လုံး ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ လက်ထပ်ပွဲအတွက် ဆေးရုံရှိ အလုပ်သမားများ အားလုံးလိုလို အလုပ်များနေကြသော်လည်း ကျွန်တော်နှင့် ကိုစံမြင့်မှာမူ ၀တ္တရား မပျက်ရအောင် လူနာများအား လိုအပ်သလို ပြုစု ကုသနေရပါသည်။ အထွေးမှာမူ ဒေါ်ခင်ကြည်အား ဖီးလိမ်းဝတ်စား ပြင်ဆင်ရာတွင် ကူညီလုပ်ကိုင်ပေးနေပါသည်။ နေ့လည် ၁ နာရီခွဲခန့်တွင် ကားကြီး ကားငယ်အသွယ်သွယ်တို့ အလံပြ ဘုရားလမ်း တလျှောက်မှ ဆေးရုံရှိရာသို့ ရောက်လာကြပါသည်။ သစ်လွင်တောက်ပြောင်သော ၀တ်ကောင်းစားလှများနှင့် ဧည့်သည့်တော်များသည်လည်း မင်္ဂလာခန်းမတွင်းသို့ အသီးသီး ၀င်ရောက် နေရာယူကြပါသည်။ စစ်ဘက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသည်လည်း သတိုးသားနှင့် သတို့သမီးတို့၏ ရှေ့နားတွင် နေရာယူပြီးကြပါပြီ။
Posted by linnzawhtike at 2/23/20130comments
ဒီဃလင်္ဃီကမြို့အနီး တောကျောင်း၌ ဘုရားရှင်သီတင်းသုံးမူစဉ်၊ အသက်သေမည့်ဆဲဆဲမှ လွတ်မြောက်လာသော အာယုဝဍ္ဎန သတို့သားကို အကြောင်းပြု၍ ဤဒေသနာကို ဟောကြားတော်မူလေသည်။
ဒီဃလင်္ဃီကမြို့နေ ရသေ့လူထွက်တစ်ယောက်ထံသို့ ယခင်က တရားကျင့် ဖက် ရသေ့တစ်ပါးရောက်လာရာ မိသားစုတို့က ရှိခိုးကြ၏။ ပုဏ္ဏားနှင့် ပုဏ္ဏားမတို့ ရှိခိုးသောအခါ ရသေ့က အသက်ရှည်ပါစေဟု ဆုပေး၏။ သားငယ်ကို ရှိခိုးစေသောအခါကား ရသေ့က ဆုမပေးချေ။ အကြောင်းကို
... မေးလျှောက်သောအခါ ရသေ့က "ပုဏ္ဏား - သင့်သားငယ်မှာ အသက်အန္တရယ် ရှိနေ၏။ ၇-ရက်မျှသာလျှင် အသက်ရှင်လတ္တံ့" ဟု မိန့်ကြား၏။ ပုဏ္ဏားက "ထိုအန္တရာယ်ကို တားမြစ်နိုင်ပါသလော" ဟု မေးရာ
ရသေ့က "ငါကား မတားမြစ်နိုင်။ ရဟန်းဂေါတမသည်သာ တားမြစ်နိုင်ပေ
ပုဏ္ဏားသည် မိမိတို့နှင့်ဝါဒချင်းမတူသော ဘုရားရှင်ထံသို့ မလာလိုသော်
လည်း သားငယ်၏ အသက်ဘေးကြောင့် မလွှဲမရှောင်သာ၍ သွားရောက်
လျှောက်ထားရ၏။ ဘုရားရှင်က "သားငယ်၏ အသက်အန္တရာယ်ကို
တားမြစ်နိုင်၏" ဟု မိန့်တော်မူပြီးလျှင် တားမြစ်နိုင်မည့်အစီအစဉ်များကိုပါ
မိန့်တော်မူလိုက်၏။ ဘုရားရှင်မိန့်ကြားတော်မူလိုက်သည့်အတိုင်း ပုဏ္ဏားသည် မိမိအိမ်ရှေ့တွင် မဏ္ဍပ်ကြီးထိုးပြီးလျှင် သံဃာတော်များကိုပင့်၍ ပရိတ်တော်များ နာကြား၏။
သားငယ်ကို ခုံငယ်ဖြင့်သိပ်ကာ သံဃာတော်တို့၏ အလယ်မှာထား၍ ဤသို့နေ့ညမပြတ် ပရိတ်တော်များ ရွတ်ဖတ်၍ ၇-ရက်မြောက်သောနေ့
တွင်ကား ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင် ပုဏ္ဏားအိမ်သို့ကြွတော်မူလေသည်။
ဘုရားရှင်ကြွတော်မူလာလျှင် တန်ခိုးကြီးသော နတ်မင်းကြီးတို့ စည်းဝေးလာကြလေရာ တန်ခိုးမကြီးသောနတ်များမှာ နောက်သို့ဆုတ်သွား
ကြရ၏။ ထိုအထဲတွင် အ၀ရုဒ္ဓက အမည်ရှိသော ဘီလူးလည်း ပါဝင်၏။
အ၀ရုဒ္ဓကဘီလူးသည် ဝေဿ၀ဏ် နတ်မင်းကြီးထံ ၁၀-နှစ်တိုင်တိုင် အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့သဖြင့် ဝေဿ၀ဏ်နတ်မင်းကြီးက ထိုသားငယ်ကို စားခွင့်ပေးထား၍ ဤနေ့တွင် စားသောက်ရန် စောင့်မျှော်နေခဲ့သော်လည်း ဘုရားရှင်နှင့်တကွ ပရိတ်တော် သံဃာတော်တို့၏ အရံအတားကြောင့် ဘီလူးသည် သားငယ်ကို မစားနိုင်တော့ပေ။ သို့ဖြစ်၍ ဘုရားရှင်က သားငယ်ကို ရှေ့တော်သို့ ခေါ်တော်မူပြီးလျှင် "အသက် ၁၂၀ ရှည်စေသတည်း"ဟု ဆုပေးတော်မူလိုက်လေသည်။
ရတနာမြတ်သုံးပါး၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးကြောင့် ဤသို့ အသက်တမ်းတိုးပွားလာ သဖြင့် ထိုသားငယ်ကို အာယုဝဍ္ဎန သတို့သားဟု မိဘများက အမည်မှည့်ကြ ၏။ အာယုဝဍ္ဎန သတို့သားသည် လူလားမြောက်လာသောအခါ သီတင်းသည်ငါးရာ ခြံရံလျက် ဘုရားကျောင်းတော်တွင် လှည့်လည်သွား လာရင်း တရားသဘင်သို့ ရောက်လာ၏။ တရားသဘင်၌ စည်းဝေးနေကြ
သော ရဟန်းများသည် အာယုဝဍ္ဎန၏ အသက်ရှည်ခြင်း အကြောင်းကို
ပြောဆိုနေကြရာ ဘုရားရှင်ကြွတော်မူလာပြီးလျှင် ထိုစကားနှင့်ဆက်စပ်၍ တရားစကား ဟောကြားတော်မူလိုသဖြင့် ဤဒေသနာကို ဟောကြားတော်မူ
သီလရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ရိုသေစွာရှိခိုးလေ့ရှိသော၊
အသက်ကြီးသော ဂုဏ်သိက္ခာကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား အရိုအသေ
ပေးလေ့ရှိသောသူတို့အား အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာကြီးခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်းဟူသော အကျိုးတရားလေးပါးတို့ တိုးပွားကြကုန်၏။
ဒေသနာတော်အဆုံး၌ အာယုဝဍ္ဎန သတို့သားနှင့် သီတင်းသည်ငါးရာတို့
သောတာပန်စသည် ဖြစ်ကြလေကုန်၏။(MWD news facebook မှ)
( ဓမ္မပဒ၊ သဟဿဝဂ် )
3 Treasures: Buddha, Dhamma & Sangha
Posted by linnzawhtike at 2/20/20130comments
မျက်စိကျန်းမာရေး နှင့် စားသင့်သောအစားအစာများ
ယခုတလော စာရေးသူမှာ မျက်စိနဲ့ ပက်သက်ပြီး မကြာခဏ အောင့်လာလိုက်၊ ခေါင်းတွေ နားထင်တွေ ထိုးကိုက်လာ လိုက်နဲ့ စာရေးတာရော စာဖတ်တာမှာပါ အနှောက်အယှက် ဖြစ်နေရတယ်၊ နောက်ပြီး ကွန်ပြူတာ သုံးနေစဉ်မှာရော မသုံးပဲ ပစ်ထားချိန်မှာပါ မျက်ရည်ပူတွေ တောက်လျောက် စီးကျကျနေတာမို့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းကို မသိတော့ေ လာက်အောင် တခါတခါ စိတ်ညစ်မိတယ်၊
ဒါကြောင့် ဘလော့ဂါ ဓမ္မမောင်နှမများ ဆီကို လှည့်လည်ဖို့ ပျက်ကွက်တာတွေ များနေတယ်၊ သည်းခံပေးကြပါ လို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်၊ တခါတလေတော့လည်း ပုံမှန် စာဖတ်ဖြစ်ပေမယ့်ခြေရာ မချန်ထား ဖြစ်လေတော့ …. သည်းခံပေးကြပါ ဟူ၍သာ …
အခုလည်း ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ ကိုယ်ပါပဲ၊ မျက်စိရှိရင် မျက်စိဒုက္ခ ခံရမှာပေါ့လေ လို့ နှလုံးသွင်းပြီး စိတ်ညစ်တာကို ဖြေသိမ့်နေ ရတယ်၊ ဒါကြောင့် လူတိုင်းမှာ ကျမ္မာရေးနဲ့ ပက်သက်လို့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ တွေ့ကြုံကြရမှာပါပဲ၊ အသက်အရွယ် ကြီးလာလေ ကျမ္မာရေးကို ပိုပြီး ဂရုစိုက်ရလေနဲ့ အော် အနတ္တ လို့တောင် ညည်းမိပါရဲ့၊ ကျမ္မာရေးအကြောင်း ပြောရင်းနဲ့ ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့တာလေး ဖောက်သည်ချပါရစေ၊ ဒီနေ့မှာ စာရေးသူတို့ မွန်ဘိုင်း စောမြကောလိပ်အတွင်းရှိ ဋ္ဌာနပေါင်းစုံမှာ တက်ရောက်နေတဲ့ Local ကျောင်းသားတွေရော ၊ foreign ကျောင်းသားတွေရော ကျောင်းဝင်းအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့် ရစေဖို့ ကိုယ်ပိုင် ID ကဒ် လုပ်ထားရမယ် တဲ့။ ဆိုတော့ ပတ်စပို့စ် ဓာတ်ပုံကို မဖြစ်မနေ ရိုက်ကြရ တယ်၊ နောင်တော်ကြီး သီတဂူစတား အပါအ၀င် ဋ္ဌာနတစ်ခုလုံးပေါ့လေ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ သွေးအမျိုးအစား ကို မေးတဲ့အချိန်မှာ A, B , AB, 0, စသည်ဖြင့် မေးပြီး positive or negative? ဆိုတော့ အားလုံး ပါးစပ်အဟောင်းသား၊ ဒါဆို Plus or Minus ? ပြောင်းမေးတော့လဲ အတူတူပဲ၊ ဘယ်သူမှ ကောင်း ကောင်း မသိကြဘူး၊
အမှန်က ကောင်းကောင်း ဆေးမစစ်ဖူးကြလေတော့ A ပိုး၊ B ပိုး C ပိုးစတာတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး မေးနေတာကို နောက်မှ သိကြရတယ်၊ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတော့ကျမ္မာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနကလဲယောင်လို့တောင်စစ်မပေးဘူး၊ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲဘယ်သူမှမ စစ်ဖြစ်ကြဘူး၊ နိုင်ငံခြားကို အလုပ်လုပ်ဖို့၊ ပညာသင်ဖို့ ထွက်ကြတဲ့ လူတွေ အများစုကတော့ သွားမည့်နိုင်ငံအလိုက် ရောဂါ ၂ မျိုးမှ ၅ မျိုး ၆ မျိုးအထိ စစ်ဆေးခံရတာ၊ ဆေးမှတ်တမ်း ယူရတာ သိရတယ်၊ ရဟန်းတော်များမှာတော့ သွေးလှူဖူးသူ လောက်သာ ကိုယ့်သွေးအမျိုးအစားကို သိကြ ရတယ်၊ အပေါင်း အနှုတ်ဆိုရင်တော့ ဝေးရော၊ ရဟန်းတော်များမှာ နိုင်ငံခြား ထွက်ရင် လဲ သွေးစစ်မှတ် တမ်း မလိုအပ်လေ တော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ နေမိကြတယ်၊
လိုအပ်ချက်က မြန်မာပြည်မှာ ရဟန်းသံဃာတွေရောပြည်သူတွေရော ကျမ္မာရေးနဲ့ ပက်သက်တာတွေ အတွေ့အကြုံတွေ နည်းနေသေးတယ်၊ ပညာပေးမယ့် ပရဟိတ အဖွဲ့တွေ မရှိလေတော့ ဘာမှ မသိကြတာ ပါပေမပေါ့။ ထားပါတော့ ကိုယ်လို အဝေးကို ပညာသင် ထွက်လိုသူများ၊ အလုပ်လုပ်သွားလိုသူများ ရဟန်းတော်များပါ မကျန် သွေးစစ်ထားကြဖို့၊ Positive or Negative / Plus or Minus ? လောက်တော့ ကြိုတင် လေ့လာထားကြဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်၊ ဒါမှ ကိုယ့်မြန်မာကို သူများ အထင်မသေးမှာပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ဒီနေ့ သွေးအမျိုးအစားကို ပြောပါ ဆိုတော့ ဦးဇင်းတပါးက သူ့ကိုယ်သူ ဘာသွေးမှန်းတောင် မသိဘူးတဲ့၊ နောက်မှ မထူးဘူး ဆိုပြီး အို “ O ” ဆိုပြီး ခပ်တည်တည်နဲ့ ဖြေပါလေရော၊ ကိုယ့်အချင်း ချင်းတော့ ပြုံးစိစိနဲ့ တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ငြိမ်နေရတယ်၊ နောက်တော့ သူများက ပလပ်စ် ဆိုတော့ ကိုယ်လဲ ပလပ်စ် လိုက်ရတာပေါ့လေ၊
ဒါကြောင့် ကျမ္မာရေး ဗဟုဿုတများ ဆိုရင် များများ သိလေ ၊ အကျိုးရှိလေ ပါ၊ စာရေးသူမှာတော့ မျက်စိ သက်သာဖို့ အတွက် ကြားဖူးနားဝ ရှိတာလေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ကြည့်မိတယ်၊ ဒါပေမယ့် စာမဖတ်ရရင် မနေနိုင်၊ ကွန်ပြူတာနဲ့လဲ ကင်းလို့ မရပြန်ဆိုတော့ မုန့်လုံး စက္ကူကပ်၊ ဂျာအေး သူ့အမေရိုက် ဆိုတာလို လုံးချာလိုက်နေတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ၊ ဒါကြောင့် အင်တာနက်မှာ မျက်စိကျမ္မာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘာတွေ သိနိုင်မလဲ ရှာကြည့်တော့ တော်တော် စုံလင်နေတာကို တွေ့ရတယ်၊ ကိုယ့်လို ခံစားနေရတဲ့ သူများလည်း နည်းနည်းလေးမှ သက်သာပါစေတော့ လို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဟိုကဒီကဖတ်မိတာတွေကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ အရင်ကလည်း မျက်စိကျမ္မာရေး ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ တင်ဖူး တယ်၊ အခုပြန်လည်မျှဝေခြင်းပေါ့လေ၊ ကိုယ့်လိုနည်းလမ်းသိပြီးဖြစ်ပေမယ့်လည်း မေ့မေ့လျော့လျော့နေမိကြတဲ့ မျက်စိဝေဒနာ ရှင်များအတွက်ပါ ။
သင့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ keyboard၊ mouse တို့ကို နေရာမှန်ထားတက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ screen ဟာ သင့်မျက်လုံးကနေသင့်ရဲ့လက်တဆန့်စာ အကွာနဲ့ မျက်လုံးရဲ့ ၂၀ ဒီဂရီအောက် နိမ့် နေရပါမယ်။
သင့် အခန်းတွင်း အလင်းရောင်ပျံ့နှံ့နေပါစေ။ ဒါမှ ကွန်ပျူတာ screenမှလာသော reflection တွေကို လျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ screen အားသင့်မျက်စိ နှင့် သင့်တော်ရာ အလင်း၊အမှောင် setting လုပ်ထားပါ။
Anti-reflective Lenses ပါသော မျက်မှန်ကို တပ် ပေးခြင်းဖြင့် တောက်ပသောအရာမှမှလာသော reflection တွေကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့မျက်စိဆရာဝန်က သင့်အားကွန်ပျူတာ နှင့် ထိတွေ့နေသူမှန်းသိရင် ထို Anti-reflective Lensesထည့်ထားတဲ့မျက်မှန်ကို ညွန်းပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာ နှင့် အလုပ်လုပ်သူများ မိနစ် ၂၀ လောက် ကြာတိုင်း ခေါင်းကိုခဏဘေးကိုလှည့်ပြီး ပေ၂၀ လောက်ဝေးတဲ့အရာတခုခုကို ကြည့်ကြည့်ပေးပါ။ဒီနည်းလမ်းဟာ သင့်ရဲ့ ပင်ပန်းနေတဲ့ မျက်လုံးအား သက်သာရာ ရစေပါတယ်။ နောက်ပြီး အခါ ၂၀လောက်
မျက်စိ အား ပိတ်လိုက်ဖွင့် လိုက်လုပ်ခြင်းဖြင့် မျက်လုံး စိုစွတ်ခြင်းကိုရယူပါ။ ပြီးရင် ခဏ ထိုင်ခုံမှ ထပြီး ခြေလှမ်း ၂၀လောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်သွေးလည်ပတ် စေပါတယ်။
လူတယောက်ဟာ ၁ မိနစ်အတွင်း ပုံမှန် ၁၂ ခါ မျက်တောင်ခတ် ကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်နေရရင် ၅ ခါ လောက်သာ မျက်တောင်ခတ် တာကိုသင်သတိထားမိပါသလား။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်မျက်စိအား ခြောက်ကပ်နေစေပါတယ်။ထိုသို့ခြောက်ကပ် မနေအောင် မျက်စဉ်း ခတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ထိုင်ခုံပေါ်တွင် မတ်မတ်ထိုင်ပြီး သင့်ရဲ့လက်ဖ၀ါး နှစ်ခုအား နွေးလာသည်အထိပွတ်ပေးပါ။ ထိုနွေးနေသော လက်ဖ၀ါးနဲ့သင့်မျက်စိနှစ်ဖက်ကို ၁မိနစ်လောက်ဖုံးအုပ်ပေးလိုက်ပါ။ သင့်မျက်စိညောင်းကိုက်၊ ပင်ပန်းလာတိုင်း
၂ကြိမ်၊ ၃ကြိမ်လောက်လုပ်ပေးပါ။ ထိုလက်ဖ၀ါးမှ လာသော နွေးထွေးမူသည် သင့်ရဲ့ပင်ပန်းနေသော မျက်စိအား သက်သာစေပါတယ်။
အားတဲ့အချိန်မှာ မျက်စိမှိတ်ပြီး ရေအေးဖြင့် မျက်နှာသစ်ပေးပါ။ အင်မတန်လန်းဆန်းခြင်းကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
သောက်ပြီး သား လက်ဖက်ခြောက် အထုပ် ကလေး များကို လွင့်မပစ်ပဲရေခဲသေတ္တာထဲထည့်ထားပြီး အားတဲ့အချိန်ကျရင် ထို လက်ဖတ်ခြောက်အထုပ်၂ထုပ်အား သင့်မျက်စိ တဖတ်စီိတွင် တင်ပြီး အနားယူပါ။ မျက်စိအားအေးမြ စေပါသည်။
ဗီတာမင် Vitamin A , C , E ပါသော အစားအစာများ ပိုစားပါ။
သံပရာရည်၊ အသီးအရွက်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဥများ နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ လဲ ပိုစားပေးပါ။
လေ့လာမှုများစွာအရ လူတင်ဓာတ်နဲ့ ဇီဇန်သင်းဓာတ်တွေဟာ အသက်ကြီးချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မက်ကူလာ ယိုယွင်းပျက်စီး ခြင်းနဲ့ အတွင်းတိမ်ရောဂါတွေလို နာတာရှည်မျက်စိရောဂါတွေရဲ့အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျ စေနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုများစွာကဆိုထားပါတယ်။
ဗီတာမင်စီဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ အင်တီ အောက်ဆီးဒင့် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုအရ ဗီတာမင်စီဟာ အတွင်းတိမ်ရောဂါ ဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျစေပြီး တခြားအာဟာရဓာတ်တွေနဲ့ရောစားပါက အသက်ကြီးချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ မက်ကူလာယိုယွင်း ပျက်စီးခြင်းနဲ့ အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးမှုတို့ဖြစ်နှုန်းကို နှေးကွေးစေပါတယ်။
ဗီတာမင်အီးရဲ့ အစွမ်းထက် အင်တီအောက်ဆီးဒင့်ကို အခွံမာသီး၊ အားဖြည့်ကွေကာနဲ့ ကန်စွန်းဥတွေထဲမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဗီတာမင်အီးဟာ ကျန်းမာတဲ့ တစ်သျှူးတွေကို ချေဖျက်ပေးတဲ့ ဖရီးရယ်ဒီကယ်တွေကြောင့် မျက်စိဆဲလ်တွေ ထိခိုက်မှုမရှိအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ကောင်းတဲ့အဆီဟာ လူတွေစားသုံးသင့်တဲ့အာဟာရထဲမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု အနေနဲ့ ပါဝင်နေပါတယ်။ အဆီဓာတ်ဟာ နာ့ဗ်ကြောစနစ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်အားကို ကောင်း စေပြီး ခုခံအားစနစ်ကို အားကောင်းစေပါတယ်။ အိုမီဂါ သရီးဖက်တီးအက်စစ်ဟာ အမြင်အာရုံအားကောင်းစေပြီး မြင်လွှာရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကို ကောင်းစေပါတယ်။ အိုမီဂါသရီး ဖက်တီးအက်စစ်ရရှိအောင် ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါးနဲ့ အခွံမာသီး စတာ တွေကို စားပေးရပါမယ်။
သွပ်ဓာတ်ဟာ မျက်စိအတွက်မရှိမဖြစ် သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သွပ်ဓာတ်ဟာ မျက်လုံးရဲ့ရောင်ခြယ်ဆဲလ်ဖြစ်တဲ့ မယ်လနင်ထုတ်လုပ်ဖို့အလို့ငှာ ဗီတာမင်အေကို အသည်းကနေ မြင်လွှာဆီကို ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကဏ္ဍမှာ ပါဝင်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွပ်ဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အာဟာရတွေဖြစ်တဲ့ ကမာကောင်၊ အသား၊ ပုဇွန်လို အခွံမာငါး၊ နွားနို့၊ မြေပဲ၊ ရွှေဖရုံစေ့၊ ချောကလက်နဲ့ ဂျုံ စတာတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။
http://www.dhammayaungchi.com/2011/09/blog-post_12.html မှ ...
Posted by linnzawhtike at 2/20/2013 1 comments
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ထူးဆန်းအံ့သြဖွ ယ် အချက်အလက်များ
ထူးထူးဆန်းဆန်း facebook page မှ
Posted by linnzawhtike at 2/19/20130comments
မဟာ သိရိသုဓမ္မာ ဒေါ်ခင်ကြည် အကြောင်း
Posted by linnzawhtike at 2/16/2013 1 comments
အဲဒီထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်က မြန်မာခုနှစ်ပြောင်းပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ် .
Posted by linnzawhtike at 2/16/20130comments
ကနေ့ ရေးသား တင်ပြမှာကတော့ အိုင်ပက် (iPad) ရဲ့ အပ်ပ် (App) အကြောင်းတွေပါ။ အပ်ပ်ဆိုတာ Application ရဲ့ ရှေ့ဆုံး စာလုံး ၃-လုံးဖြစ်တဲ့ App ကို ယူသုံးထားတာ ဖြစ်ပြီး၊ အသုံးချ ဆော့ပ်ဝဲလ် အမျိုးအစား ဖြစ်တယ်။ Apps (S-ပါတဲ့ ဗဟူဝုစ်) ကို သုံးထားရင် အသုံးချ ဆော့ပ်ဝဲလ် အများကြီးကို ဆိုလိုတာပါ။ ကွန်ပျူတာ ဝေါဟာရနဲ့ နှိုင်းရင် အိုင်ကွန် (icon) နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ ကွန်ပျူတာမှာ Office ရဲ့ icon ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင် စာစီစာရိုက် လုပ်ငန်း လုပ်နိုင်မယ်။ Window Media Player ရဲ့ icon ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင် သီးချင်း နားထောင်နိုင်မယ်၊ ဗီဒီယို ကြည့်နိုင်မယ်ပေါ့။ ဒီလိုပါပဲ၊ အိုင်ပက်မှာလည်း Safari ဆိုတဲ့ App ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင် အင်တာနက် အဖွင့်မျက်နှာ ရောက်သွားပြီး ကြိုက်ရာ ၀က်ဆိုက်ကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်တယ်။ You Tube App ကို ကလစ်နှိပ်လိုက်ရင် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယို၊ သီးချင်း သိန်းသန်းချီကို ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်။ App ကို “အသုံးချ”လို့ ဘာသာပြန်ကြပေမယ့် အရပ်သုံး စကားလုံးနဲ့ဆို ကိရိယာ၊ တန်ဆာပလာ-လို့ ခေါ်ရမယ် ထင်တယ်။ လက်သမားဆရာ တစ်ယောက်မှာ ကိရိယာလို့ ခေါ်တဲ့ ဆောက်၊ တူ၊ ပေါက်ဆိန်တို့ မရှိရင် အလုပ် မလုပ်နိုင်သလို သင်ပုန်း (Tablet) လောကမှာလည်း App ဟာ မရှိမဖြစ် ကိရိယာတွေပါ။
အိုင်ပက် (iPad) အတွက် အပ်ပယ်လ်ရဲ့ App Store မှာ တင်ထားတဲ့ App အမျိုးအစားပေါင်း သိန်းချီ ရှိပါတယ်။ App တစ်ခုချင်းစီမှာ သီးသန့် လုပ်ဆောင်ချက် ရှိကြတယ်။ ကိုယ်စီ လက္ခဏာရပ်တွေနဲ့ပေါ့။ စာဖတ်တဲ့ App၊ အဘိဓာန် App၊ သီးချင်းနာထောင်တဲ့ App၊ ဗီဒီယို App၊ မြေပုံကြည့်တဲ့ App၊ မှတ်စုသိမ်းတဲ့ App စတာတွေပေါ့။ App ကို အခမဲ့ ပေးတာ ရှိသလို ပိုက်ဆံပေး ၀ယ်ရတာလည်း အများကြီးပါ။ အခမဲ့ ရရှိတဲ့ App အများစုကိုတော့ အပြည့်အစုံ မပါတတ်ပါ။ သုံးရရုံလေးသာ အခမဲ့ ပေးထားတာပါ။ ၀ယ်သုံးရတဲ့ App တွေကလည်း ဈေးကြီးရင် ကြီးသလောက် ပိုပိုပြီး ပြည့်စုံတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ အဘိဓာန် အပ်ပ် (Dictionary App) ဆိုပါစို့- ပေးထားတဲ့ ဖရီးဗားရှင်း(အခမဲ့မူ) ဆိုရင် မီနင်း (အဓိပ္ပါယ်) တစ်ခုလောက်ပဲ ဖွင့်ပေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀ လောက် ပေးဝယ်ရတဲ့ အောက်စဖို့ အဘိဓာန် အပ်ပ် (Oxford Dictionary App) ဆိုရင် အပြင်မှာ ထုတ်ရောင်းနေတဲ့ စာအုပ်အတိုင်း တအားကို ပြည့်စုံတယ်။
အပ်ပ် (App) သိန်းချီ ရှိတဲ့ကြားက အိုင်ပက် (iPad) ၀ယ်ကတည်းက အလိုလို ပါလာပြီးသား အပ်ပ် (App) အကြောင်းတွေနဲ့ စလိုက်ကြရအောင်…။ အိုင်ပက် (iPad) မှာ အော်တိုမတစ် ပါလာတတ်တဲ့ အပ်ပ် (App) ဟာ အမျိုးအစား ၁၇-မျိုးလောက် ရှိတယ်။ အပ်ပ် (App) တွေရဲ့ ပုံပန်း၊ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို တစ်ခုချင်းစီ ရှင်းပြသွားမှာပါ-
13. Game Center
1. Safari (ဆာဖာရီ- အင်တာနက် ဘရောက်ဆာ)
အိုင်ပက်နဲ့ အင်တာနက်ကို ချိတ်ဆက်ထားပြီး သုံးတော့မယ်ဆိုရင် အမြဲတန်း ကလစ်နှိပ် ဖွင့်ရတဲ့ အပ်ပ် (App) တစ်ခုပါ။ အိုင်ပက်ကို အလျားလိုက် လှဲထားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒေါင်လိုက် ထောင်ထားတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆာဖာရီ (Safari) ကို ဖွင့်လိုက်ရင် မျက်နှာပြင် အပြည့် အလိုလို ပေါ်ပေးတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးတဲ့ ၀က်ဆိုက်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်လိုပဲ သေးငယ်တဲ့ ၀က်ဆိုက်ဖြစ်ဖြစ် အပြည့် ပေါ်နေမှာပဲ။ အလျားလိုက်ကို လန်းစကိတ် (Landscape) လို့ သုံးနှုန်းပြီး ဒေါင်လိုက်ကို ပေါ့ထရိတ် (Portrait) လို့ သုံးပါတယ်။ (အဲ… ၀က်ဆိုက်တစ်ခုခုရဲ့ လိပ်စာ မပါရင် အဖြူထည်ကြီးပဲ ပေါ်နေမှာနော့်။)
ဆာဖာရီကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာ ပွင့်လာမှာပါ။ အင်တာနက် စာမျက်နှာရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာ အလွတ်ကွက် ၂-ခုနဲ့ ဘားတန်းရယ်၊ အပေါင်းလက္ခဏာ (+) ပါတဲ့ ဘားတန်းရယ် ဆိုပြီး ဘားတန်း ၂-ခု ပေါ်လာမယ်။ ထိပ်ဆုံး ဘားတန်းထဲက အလွတ်ကွက် ၂-ကွက်မှာ ရှည်တဲ့ (ဘယ်ဘက်) အကွက်ဟာ ၀ပ်ဆိုက် တစ်ခုခုရဲ့ လိပ်စာ အပြည့်အစုံကို ဖော်ပြပေးတဲ့ အကွက်ဖြစ်ပြီး၊ တိုနေတဲ့ အကွက် (ညာဘက်) ကိုတော့ မသိသေးတဲ့ ၀က်ဆိုက်တစ်ခုခုကို ရှာဖွေရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ အကွက် ဖြစ်တယ်။
အဲဒီ အလွတ်ကွက် ၂-ကွက်အပြင် ညာဘက်ဒေါင့်နားမှာ အခြား လုပ်ဆောင်ချက်များလည်း ရှိသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ နောက်သို့ / ရှေ့သို့ကို ညွှန်ပြတဲ့ မျှား ၂-ခုရယ်၊ ဖွင့်ထားတဲ့ စာအုပ်ပုံစံရယ်၊ စာအုပ်အလယ်ကနေ ဖောက်ထွက်လာတဲ့ မျှားရယ် ဆိုပြီး နောက်ထပ် အပိုဆောင်း လုပ်ဆောင်ချက် ၃-ခု ပါသေးတယ်။ အင်တာနက် စာမျက်နှာ တစ်ခုအတွင်းမှာ ဟိုဟာကြည့်လိုက်၊ ဒီဟာဖတ်လိုက် ထပ်ခါထပ်ခါ နှိပ်ရှာတဲ့အခါမှာ (စာအုပ်ကို လှန်လှောသလို) ဟိုရောက်လိုက်၊ ဒီရောက်လိုက် ဖြစ်နေမယ်။ အဲဒီအခါ ရှေ့ကို ဆက်သွားချင်ရင် ရှေ့ဘက်ကို ညွှန်ပြထားတဲ့ မျှားကို နှိပ်၊ နောက်ကို ပြန်ဆုတ်ချင်သပဆိုရင် နောက်ဘက်ကို ညွှန်ထားတဲ့ မျှားကို နှိပ်လိုက်ရုံပါ။ ဒီမျှားတွေကို ကက်ဆက်၊ အောက်စက်တွေမှာ သုံးတဲ့ Previous နဲ့ Next တို့ရဲ့ ပုံစံနဲ့ တစ်ထေရာတည်းပါ။ အလယ်မှာရှိတဲ့ စာအုပ်ဖွင့်ထားတဲ့ ပုံစံက ဘွတ်မာ့က် (Bookmarks) ပါ။ ကြိုက်တဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို မှတ်ထားတဲ့ လင့် (Link) စာရင်းလို့ ပြောရင် ရမလားပဲ။
နောက်ဆုံးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်အလယ်ကနေ မျှားဖောက်ထွက်သွားတဲ့ ပုံစံဟာ ကြိုက်တဲ့ ၀က်ဆိုက်ကို မှတ်ထားဖို့ရယ်။ ဟုမ်း (Home) ဆိုတဲ့ မူလမျက်နှာမှာ အပ်ပ် (App) တစ်ခုအနေနဲ့ သိမ်းထားဖို့ရယ်။ အီမေးလ်ကနေတစ်ဆင့် အများကို မျှဝေ ပို့ပေးဖို့အတွက်ရယ်ပါ။ အောက်ဘားတန်းမှာကျတော့ လက်ရှိ ဖွင့်ထားတဲ့ စာမျက်နှာရယ် ဘေးမှာ အပေါင်းလက္ခဏာ (+) ရယ် ရှိတယ်။ အပေါင်းလက္ခဏာ (+) ကို နှိပ်လိုက်ရင် နောက်ထပ် အလွတ် စာမျက်နှာတစ်ခု ပေါ်လာမယ်။ နောက်ထပ် ၀က်ဆိုက်တစ်ခုကို ထပ်ရှာလို့ ရတယ်ပေါ့။ အပေါင်းလက္ခဏာကို နှိပ်တိုင်း နှိပ်တိုင်း နောက်ထပ် နောက်ထပ် စာမျက်နှာ အလွတ် အများကြီး ပေါ်လာမှာပါ။ ကွန်ပျူတာမှာလိုပဲ အိုင်ပက်မှာလည်း အင်တာနက် စာမျက်နှာ (Web Pages) မြောက်များစွာ တပြိုင်တည်း ဖွင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ကြည့်ချင်တဲ့ မျက်နှာကို ကလစ်ထပ်နှိပ်လိုက်ရုံပဲ။ Active (နည်းနည်းလင်း) နေတဲ့မျက်နှာဟာ ဖွင့်ထားတဲ့ မျက်နှာပေါ့။
မသိသေးတဲ့ ၀က်ဆိုက်တစ်ခုခုကို ရှာချင်တော့မယ်ဆိုရင်-
(၁) ဘားတန်း ၂-ခုထဲက အပေါ်ကို ရွေး၊ အလွတ်ကွက် ၂-ကွက်ထဲက ညာဘက်ဒေါင့်ကွက်ကို ရွေးပါ။
(၂) ညာဘက် အလွတ်ကွက်မှာ ကလစ် ၁-ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ကနေ လက်ကွက် (ကီးဘုတ်) အလိုလိုပေါ်လာမယ်။
(၃) ကြိုက်တဲ့ စာလုံးပေါင်းတစ်ခုခုကို ရိုက်လိုက်ပါ။ (ဥပမာ book ရိုက်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့၊ book နဲ့စတဲ့ စာလုံးတွေ တသီတတန်းကြီး ပေါ်လာမယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်ပေါ့။)
အဲ.. တစ်ခုတော့ သတိထားရမှာက ဇော်ဂျီဖောင့်နဲ့ ရေးတင်ထားတဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ် (BlogSpot) တွေကိုတော့ ဖတ်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဖွင့်လိုက်ရင် လေးကွက် အလုံးတွေပဲ ပေါ်လာမယ်။ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေကို ဖတ်ချင်ရင် မိုးကုတ် (Mogok) လို့ခေါ်တဲ့ ၀က်ဘရောက်ဆာကို ဒေါင်းလုတ်ထားရပါမယ်။
Tab (အင်တာနက် မျက်နှာ) အများကြီး ဖွင့်ထားတဲ့ အိုင်ပက်ပုံစံ
ဆက်စပ်လို့ မိုးကုတ် (Mogok) ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပုံကို တစ်ခါတည်း တင်ပြသွားပါ့မယ်။ အင်္ဂလိပ် “A” အက္ခရာလို အပြာရောင်နဲ့ App Store ဆိုတဲ့ အပ်ပ်ကို မူလမျက်နှာမှာ ရှာပါ။
(၁) App Store (ဒီစာရင်းထဲမှာ နံပါတ် ၁၂ ခုမြောက်) ကို တွေ့တာနဲ့ ၁-ချက် ကလစ်လိုက်ပါ။ (၂) ပေါ်လာတဲ့ မျက်နှာရဲ့ ညာဘက် (အလွတ်) အကွက်မှာ ၁-ချက် နှိပ်ပါ။ (အောက်ဘက်မှာ ကီးဘုတ် ပေါ်လာမယ်)
(၃) Mogok လို့ ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ (Mogok web browser စာတန်းပေါ်လာမယ်။ ရွေးပြီး နှိပ်လိုက်ပါ)
(၄) အင်္ဂလိပ်လို “M” အကြီးနဲ့ အနီရောင် အကွက် တစ်ကွက်ပေါ်လာမယ်။
(၅) (ဘေးနားမှာရှိတဲ့) FREE ကို ၁-ခါနှိပ်၊ ပြီးရင် INSTALL APP ကို ထပ်နှိပ်။
(၆) (Apple ID အကောင့် ရှိသူများအတွက်) ပတ်စဝေ့ါ (Password) တောင်းလိမ့်မယ်။ ပတ်စဝေါ့ ရိုက်ဖြည့်လိုက်ပါ။ ခဏလေးစောင့် ဒေါင်းလုတ် လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ပြီးသွားရင် အဲဒါကို နှိပ်ပြီး ဖွင့်။ ဒါဆိုရင် ဘယ်မြန်မာဝက်ဆိုက်ကို မဆို မြန်မာလို ဖတ်လို့ ရပါပြီ။ (မှတ်ချက်။ ID အကောင့် ရှိသူများအတွက်သာ ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ ရမယ်။ မရှိသူများအတွက် ထည့်ထားပြီးသား အပ်ပ်တွေကိုသာ သုံးလို့ ရမယ်။ ID အကောင့် ဖွင့်ပုံကို သီးခြား ထပ်ဖော်ပြပါမယ်။)
2. Mail (အီမေးလ်)
ဘယ်အီမေးလ် အကောင့်ကနေမဆို အီမေးလ် လက်ခံရယူခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အပ်ပ် (App) တစ်ခုပါ။ ဓာတ်ပုံ၊ PDF ဖိုင်တွေကိုလည်း တွဲပို့နိုင်တယ်။ ပေးပို့လာတဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ PDF ဖိုင်တွေကိုလည်း ပရင်တာ တစ်ခုခုကို ထည့်ထားပါက ပရင့်လည်း ထုတ်နိုင်သေးတယ်။ PDF Creator ထည့်ထားရင် PDF ဖိုင်ပါ လုပ်လို့ရသေးတယ်။ မေးလ်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တဲ့ မိုဘိုင်းမီ၊ မိုက်ခရိုဆော့အိတ်စ်ချိန်းကနေ တစ်ဆင့် အသုံးများနေတဲ့ ရာဟူမေးလ် (Yahoo)၊ ဂူးဂဲလ်မေး (Google)၊ အေအိုအယ်လ် (AOL) မေးလ်၊ ဟော့မေးလ် (Hotmail) တွေကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
Mail (အီမေးလ်) အကောင့်တစ်ခုခုကို ၀င်ထားတဲ့ အိုင်ပက်ပုံစံ
မေးလ်ကို ဖွင့်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်အဆင့်-
(၁) ဟုမ်း (Home) မှာ ရှိနေတဲ့ (ခွေးစိတ်သွား) Setting ကို နှိပ်ပါ
(၂) ဘယ်ဘက်ကော်လံမှာ ရှိနေတဲ့ Mail, Contacts, Calendars ကို နှိပ်ပါ။
(၃) ညာဘက်ကော်လံမှာ ရှိနေတဲ့ Add Account ကို နှိပ်ပါ။
(၄) ညာဘက်ကော်လံမှာ ပြထားတဲ့ မေးလ်အများစုထဲက မိမိသုံးမယ့် Yahoo, Google, Hotmail တစ်ခုခုကို နှိပ်ပါ။ (ဘောက်တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မယ်။)
(၅) Name = ……………………, မိမိနာမည်
Email = ……………………, လက်ရှိသုံးနေတဲ့ အီမေးလ်
Password = ……………………, လျို့ဝှက်စာဂဏန်း
Description = ……………………, Yahoo, Google တစ်ခုခုကို ရွေးပါ။
(၆) ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာ ရှိတဲ့ Next ကို ဆက်နှိပ်ပါ။
(၇) Save လိုက်ပါ။ ရွေးချယ်ထားတဲ့ မေးလ် အော်တို ၀င်သွားပါပြီ။
ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် မေးလ်ကို သုံးချင်ရင် Mail ဆိုတဲ့ App ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါ။ အလိုလို မေးလ်ထဲ ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဘက်ကော်လံမှာ ရှိတဲ့ ဇယားတွေက ကွန်ပျူတာမှာ သုံးနေတဲ့ အီမေးလ်အတိုင်းပါပဲ။ (မှတ်ချက်= ဖွင့်ထားတဲ့ မေးလ်အကောင့် အမြဲတန်းလိုလို အော်တို ၀င်နေမှာနော့်။ အိုင်ပက် ပါဝါ မပိတ်မချင်း သူများတွေရဲ့ မေးလ်ထဲမှာ မိမိရဲ့ အီမေးလ်အကောင့် Always ဖြစ်နေမယ်။ စိမ်းနေမယ်။)
3. Photos (ဓာတ်ပုံ)
နေကြာပန်းပုံနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အပ်ပ် (App) ကို Photos (ဓာတ်ပုံ) လို့ ခေါ်တယ်။ ဒီ Photos (ဓာတ်ပုံ) ကို နှိပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ခေါင်းစီး ၃-ခုရှိတဲ့ စာမျက်နှာ တစ်ခု ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ခေါင်းစီး ၃-ခုကတော့- Photos, Albums နဲ့ Place ပါ။
Photos ခေါင်းစီးအောက်ကနေ အိုင်ပက်နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ အင်တာနက်ကနေ သိမ်းထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်တယ်။ Albums ခေါင်းစီးအောက်ကနေ အယ်လ်ဘမ်တစ်ခုအနေနဲ့ သိမ်းထားပေးတယ်။ Place ခေါင်းစီးအောက်ကနေ ရောက်ရှိတဲ့ နေရာကို ပြပေးတဲ့ မြေပုံလည်း ရှိတယ်။ မိမိရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံဟာ ဘယ်နေရာလဲရှိတာကို ပြသပေးတဲ့ သဘောပါ။
ဓာတ်ပုံတွေကို Slideshow လုပ်ထားတဲ့ နမူနာပုံစံ
ပြီးတော့ ဒီခေါင်းစီး ၃-ခုဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ နောက်ထပ် ရှိပါသေးတယ်။ Slideshow နဲ့ မျှားခေါင်းလေးပါ။ Slideshow ဟာ ဓာတ်ပုံတွေကို စလိုက်ရှိုးအနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ထည့်ပေးထားတယ်။ စလိုက်ရှိုးအတွက် ဓာတ်ပုံ တစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံ အကူးအပြောင်း လုပ်ပေးတဲ့ ထရန်စီရှင်း (Transition) နဲ့ ထည့်သွင်းရမယ့် နောက်ခံသီချင်း (Music) လည်း ပါဝင်သေးတယ်။
Slideshow ရဲ့ ဘေးနားမှာ ရှိနေတဲ့ မျှားခေါင်းကို နှိပ်ပါက ဓာတ်ပုံကို Share လုပ်ဖို့ (အများဆီကို မေးလ်ကနေတစ်ဆင့် ပို့ပေးဖို့) လုပ်ဆောင်ချက်ရယ်၊ ကော်ပီ (Copy) ရယ်၊ ဖျက်ဖို့ (Delete) ရယ်ဆိုပြီး နောက်ထပ် ၃-ခု ရှိပါသေးတယ်။ အဲ…ထူးဆန်းတာ တစ်ခုက အခုနောက်ပိုင်း (iOS.5.1.1 စက်လည်ပတ်မှုစနစ် မြှင့်တင်ပြီး နောက်ပိုင်း) အိုင်ပက် လော့ဂ်ကျနေသည့်တိုင် (အိုင်ပက်ကိုဖွင့်တဲ့ မျှားခေါင်းဘေးမှာ ရှိနေတဲ့) နေကြာပန်းပုံကို နှိပ်ပါက ဓာတ်ပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။
4. iPod (အိုင်ပေါ့)
iTunes ကနေတစ်ဆင့် ကိုယ်ပိုင် ထည့်သွင်းထားတဲ့ သီးချင်း၊ အင်တာနက်ကနေ ဒေါင်းလုတ်ထားတဲ့ သီချင်း၊ ရီကော့ လုပ်ထားတဲ့ အသံတွေကို စုစည်းပေးထားတဲ့နေရာကို iPod (အိုင်ပေါ့) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ iPod (အိုင်ပေါ့) ကို အသံပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွင့်တဲ့ ပလေယာ တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးပါတယ်။ စမတ်ဖုန်းမှာ ပါတတ်တဲ့ MP3 ပလေယာပါပဲ။ (အရုပ်မပါ၊ သီချင်း အသံသက်သက် ဖွင့်တဲ့ ကိရိယာပေါ့။) iPod (အိုင်ပေါ့) ကို ဖွင့်ပြီး နားထောင်မယ်ဆိုရင် အောက်ပါ ပေးထားတဲ့ နည်းလမ်း ၂-မျိုးထဲက တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ သီးချင်း၊ အသံတွေကို အရင်ထည့်သွင်းထားရပါမယ်။
-အိုင်ပက်ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။
-iTunes ဆိုတဲ့ ဆော့ပ်ဝဲလ်ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။ (ကွန်ပျူတာမှာ iTunes အင်စတောလ် ထားပြီးသား ဖြစ်နေရပါမယ်။)
- (iTunes ပွင့်လာရင်) File > Add file to Library ကို ရွေးနှိပ်ပါ။ (Add file to Library ဆိုတဲ့ ဘောက်တစ်ခု ထပ်ပေါ်လာမယ်။)
- (ကွန်ပျူတာမှာ သိမ်းဆည်းထားတဲ့) သီးချင်းရှိတဲ့ ဖိုင်ကို ရှာရွေးပါ။ တွေ့ရင် ကလစ် ၂-ချက် အမြန်နှိပ်ပါ (သို့မဟုတ်) ကလစ် ၁-ချက်နှိပ်ပြီး ဘောက်ထဲက Open ကို ထပ်ဖွင့်ပါ။ ဒါဆိုရင် မိမိရွေးထားတဲ့ သီချင်း၊ အသံက iTunes ထဲ ရောက်လာပြီ။
- iTunes ရဲ့ ညာဘက်အောက်ဆုံးဒေါင့်မှာ ရှိနေတဲ့ Sync ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ (အိုင်ပက်ထဲ သီချင်း၊ အသံ ၀င်သွားနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ကြိုက်သလောင် သွင်းပြီးရင် အိုင်ပက်ကို ကြိုးဖြုတ်၊ အိုင်ပက်ထဲက iPod (အိုင်ပေါ့) ကို ဖွင့်လို့ ရပါပြီ။
-အိုင်ပက်ထဲက ဟုမ်း (မူလမျက်နှာ) မှာ ရှိတဲ့ iTunes ကို ဖွင့်ပါ။ (Apple ရဲ့ iTunes Store ရောက်သွားမယ်။) - iTunes Store ရဲ့ စာမျက်နှာ အောက်ခြေမှာ Podcasts, iTunes U, Dowloads ဆိုပြီး စာတန်း သုံးမျိုး ရှိနေမယ်။ အဲဒီသုံးခုထဲက ပထမ ၂-ခုအနက် တစ်ခုခုကို ရွေးပြီး သက်ဆိုင်ရာ အသံဖိုင်၊ သီးချင်းတွေ ရလာလိမ့်မယ်။ ဒေါင်းလုတ် လုပ်ချင်ရင်တော့ နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Dowloads ကို ရွေးပေါ့။ iPod (အိုင်ပေါ့) နဲ့ သီးချင်း၊ အသံတွေကို ဖွင့်မယ်၊ ပိတ်မယ်၊ ကျော်မယ်၊ ပြန်ရစ်မယ်ဆိုရင် MP3 Player မှာ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ပုံလုပ်နည်းအတိုင်းသာ လုပ်လိုက်ပါ။
5. Calendar (ပြက္ကဒိန်)
စာရင်းဇယားနဲ့ အစီအစဉ်တွေကို ချမှတ်ဖို့အတွက် အိုင်ပက်မှာ ပြက္ကဒိန်ကို ထည့်ပေးထားတယ်။ နေ့၊ လနဲ့ နှစ်အလိုက် ပြက္ကဒိန်ကို ထည့်ပေးထားသဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာကို ကြိုတင် ကြည့်နိုင်သလို တရက်တည်းမှာပင် ဖြစ်စဉ် တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း ပြည်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသေးတယ်။ ဥပမာ- လာမယ့် အောက်တိုဘာလ ၃၁-ရက်နေ့မှာ သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော် နွှဲမယ် ဆိုပါစို့။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို ပြက္ကဒိန်မှာ မှတ်တမ်းတင် ထည့်သွင်းထားလိုပါက-
(၁) ပြက္ကဒိန်ရဲ့ ထိပ်ပိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့ Day, Week, Month, Year, List မီနူထဲက Month ကို ရွေးနှိပ်ပါ။ (၂) အောက်တိုဘာလ ၃၁ ကို ရွေးပါ။
(၃) ပြက္ကဒိန်ရဲ့ အောက်ခြေမှာ ရှိနေတဲ့ အပေါင်းလက္ခဏာ (+) ကို နှိပ်ပါ။ (ဇယားတစ်ခု ကျလာလိမ့်မယ်။) (၄) Title နေရာမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲမယ့် အဖြစ်အပျက်ကို နာမည်ပေး ရိုက်ထည့်ပါ။ (ဥပမာ Lighting Festival) -Location နေရာမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲမယ့် နေရာကို နာမည်ပေး ရိုက်ထည့်ပါ။ (ဥပမာ-Shwedagon) -Start, Ends, Time Zone ကို ထပ်နှိပ်ပါ။ (နေ့၊ အချိန်၊ နာရီ ပြောင်းရန်)
-ဇယားအောက်တွဲမှာ ထပ်ပေါ်လာတဲ့ နေ့ရက်၊ နာရီ၊ အချိန် (မနက် / ညနေ) တွေကို ထပ်ရွေးပါ။ (ဥပမာ Web,7PM –9PM) ရွေးပြီးပြီဆိုရင်-
-(ဇယားထိပ်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့) Done ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ပါဝင်ဆင်နွှဲမယ့် သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲတော် အကြောင်းကို ဦးဏှောက်နဲ့၊ မှတ်စုစာအုပ်နဲ့ မှတ်သားစရာ မလိုတော့ဘဲ၊ ပြက္ကဒိန်ကို ကောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ပွဲတော်ကို ဆင်နွှဲရမယ့်အချိန်ကို တန်းသိမှာပါ။ ဆိုလိုတာက ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃၁ (သီတင်းကျွတ်လပြည့်) နေ့၊ ညပိုင်း ၇-နာရီကနေ ၉-နာရီအထိကို အိုင်ပက်ရဲ့ ပြက္ကဒိန်ဇယားကွက်ထဲမှာ ထည့်သွင်းလိုက်တာပါ။
Posted by linnzawhtike at 2/13/20130comments
အခုဖော်ပြတဲ့ 3G/4G (သရီး-ဂျီ/ ဖိုး-ဂျီစနစ်) ကိုတော့ ဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ WiFi+3G (4G) အိုင်ပက် အမျိုးအစားကိုသာ ရည်ရွယ်တာပါ။ ပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ ၀ိုင်ဖိုင် (Wi-Fi) သက်သက် အိုင်ပက်နဲ့ မဆိုင်ပါ။ (ရေးတင်ထားပြီး ဖြစ်သည့် “အိန္ဒိယအတွက် အိုင်ပက်-သရီး” သတင်းကို ကလစ်နှိပ်ပြီး ဖတ်နိုင်ပါတယ်- http://ayechanmon.blogspot.in/2012/04/ipad3_17.html)
မူလမျက်နှာ (Home Screen) မှာ ရှိနေတဲ့ Setting (ခွေးသွားစိတ်နဲ့ ရုပ်ပုံ) ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ နောက်မျက်နှာတစ်ခု ထပ်ပွင့်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာ Setting နဲ့ General ဆိုပြီး ကော်လံ ၂-ခု ဖြစ်နေမယ်။ ဘယ်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကော်လံထဲက Wi-Fi (တခြမ်းထဲ လိုင်း၎-ထပ်ရုပ်ပုံ) ကို ထပ်နှိပ်။ ပြီးရင် Wi-Fi ကို On လိုက်ပါ။ အောက်မှာ ရှိတဲ့ Choos A Network ကို နှိပ်ပါ။
အိုင်ပက်ရဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ အပ်ပ် (App) များကို အပိုင်း-၂ မှာ ဆက်လက် ဖော်ပြပါမယ်
Posted by ayechanmon